” တစ်ခါက အရပ်မျက်နှာများ နဲ့ ကျွန်တော် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” တစ်ခါက အရပ်မျက်နှာများ နဲ့ ကျွန်တော် “
” တစ်ခါက အရပ်မျက်နှာများ နဲ့ ကျွန်တော် “
Posted by ခင်ခ on Aug 7, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 23 comments
ကျုပ် မန်း မှာနေဖြစ်ဖို့ စရောက်ခဲ့စဉ်က အရပ်မျက်နှာတွေနဲ့ အလွဲတွေပေါ့ဗျာ။
ကျုပ်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မှာ ကလေး လူကြီး လမ်းညွှန်ကြတဲ့အခါ ရှေ့လမ်းဆုံကျ ဘယ်ကွေ့ ညာကွေ့ တည့်တည့်သွား အဲလိုမျိုးညွှန်ကြတာ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလိုဘဲ ပြောကျင့်ရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခြေအနေအရ မန်း မှာနေဖြစ်ဖို့ များတယ်ဆိုတော့ နေစရာလေး တစ်ခုတော့ ကိုယ်ပိုင်လေးရှိမှ ဖြစ်မှာလေ နေရာဌားနေကြရရင် သူများကိုအိမ်လခပေးနေရတာက မစားရမသောက်ရနှမျော သမို့ နေစရာမြေကွက်( ဒီအရပ်အခေါ် မြေ၀ိုင်း ) လေး တစ်ကွက်လောက်တော့ မြို့သစ်ဖက်မှာ ၀ယ်ရအောင် ဆိုပြီး ကျုပ်က ဆိုင်ကယ်မောင်း အနောက်က မြေကွက်လိုက်ပြမယ့် အကျိုးဆောင်က လိုက်စီးပြီး သွားကြ တာပေါ့ အဲဒီမှာ ကိုလူချောက
” အရှေ့လမ်း ဆုံရောက်ရင် အနောက်ကွေ့ပြီးမောင်းလိုက် နောင်ကြီး ”
အဲဒါနဲ့ ကျုပ်စိတ်ထဲထင်လိုက်တာက သြော် သူပြမယ့်မြေကွက်က နောက်မှာကျန်နေရစ်ခဲ့လို ပြန်ပြမလို့ ပြန်ကွေ့ခိုင်းတာဘဲဆိုပြီး လမ်းဆုံရောက်ရော ဆိုင်ကယ်ကို နောက်ပြန်ကွေ့ပြီးမောင်းလိုက်တော့ သူက
” နောင်ကြီးဘယ်ပြန်မောင်းတာလည်း ကျုပ်ပြမယ့်မြေကွက် မကြည့်ချင်တော့လို့လား ” ဆိုပြီးပျာပျာသလဲ မေးတော့မှ
” ဟင် ကိုဆရာဘဲ ရှေ့လမ်းဆုံရောက်ရင် အနောက်ကွေ့ ဆို ဒါဆို ဘယ်ကွေ့ ညာကွေ့ နဲ့ ပြောဗျာ”
” အဲဒါဆို ရှေ့လမ်းဆုံရောက်ရင် ညာကွေ့ဗျာ ”
အဲဒီလို ဘယ် ညာ ကွေ့ တည့်တည့်သွား နဲ့မှ အဆင်ချောခဲ့တယ်လေ။
မန်း ရောက်ခါစ သွားဖို့လာဖို့အတွက် ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးလောက်တော့ ၀ယ်ထားမှဖြစ်မယ် ဒီမှာက လမ်းလျှောက်ရလျှင်လည်း နေကပူပူနဲ့ ပြီးတော့ သူတို့က ရှေ့ ၂ ပြ လောက်ဆိုရောက်ပြီပြောလို့ တစ်ခါက လမ်းလျှောက်မိပါတယ် သူ့ ၂ ပြ က ရန်ကုန်အကွာအဝေးနဲ့ဆို ဓာတ်တိုင် ၁၂ တိုင် အကွာအဝေးလောက် ရှိတာဗျ၊ ဘစ်ကားကလည်း တရေးလောက်အိပ်ပြီး စီးရတာမျိုးဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့ ကျုံးရှေ့ အနုပညာ ကဇက်ရုံနား ဘစ်ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆိုင်ကယ်ရောင်းမယ့် ပြည်တော်သာတိုက်ခန်းအိမ်လိပ်စာကို ဘစ်ကား ဂိတ်မှာတွေ့တဲ့ အဒေါ်ကြီး ကိုပြပြီး မေးလိုက်တော့
” အဲဒီလိပ်စာအတိုင်းဆို လူလေးတို့ အခုဒီလမ်းအနေ တောင် ဘက်ကို ပြန်လျှောက်ပြီး လမ်းမဆုံကြီးကျရင် အနောက်ဖက်ကွေ့လိုက် အဲဒီနားမှာ ” လို့ ဆိုလေတော့ ကျုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံလည်း အဲဒီကနေ လှမ်းကြည့် တော့ မန္တလေးတောင်ကို လှမ်းမြင်နေရတာဆိုတော့ ဟိုအဒေါ်ကြီးက တောင်ဘက် လျှောက်ပြေတာ ဒီ မန္တလေးတောင်ကိုဆိုပြီး လျှောက်ကြတာ တောင်ခြေရောက်ခါနီး ဆိုက်ကားဆရာတစ်ယောက်တွေ့တော့ တစ်ခါမေး ကြည့်တော့မှ မဟုတ်ဘူး နောက်မှာကျန်ခဲ့ပြီ ဟိုအဒေါ်ကြီးပြောတဲ့ တောင် ဘက် ဆိုတာ မန္တလေး တောင်ဘက်မဟုတ်ဘူး တောင်အရပ်မို့ အနောက်ပြန်လျှောက်ရမှာဆိုတာနဲ့ ချွေးတွေကလည်းရွဲနေပြီး မောက လည်းမောနေတော့ သူ့ဆိုက်ကားဘဲ ဌားပြီးသွားခဲ့ကြရတာမျိုးလေ အဲဒီတုန်းက ကျုပ် ဆိုက်ကားစီးရင်း တွေးမိသေးတယ် နောက်သူတို့ညွှန်ရင် ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့သလို နေထွက်ရာအရပ်ကို မျက်နှာမူလို့ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းပါ လက်ယာလက်သည် တောင် လက်ဝဲလက်သည်မြောက် အနောက်ကျောသည် အနောက်အရပ်ဖြစ်သည်ဆိုပြီး နေကြည့်ပြီး လုပ်ရမလိုပါဘဲ ရောက်ခါစက အရှေ့အရပ်က ဘယ်ဘက်မှာလဲ ဆိုတာ သိပ်မသိဘူးမို့ နေ ကိုဘဲ မော့မော့ကြည့်ရတာပေါ့။
ကျုပ်အိမ်ကနေ ၆၂ လမ်းအတိုင်း ဆိုင်ကယ်မောင်းလာရင်း လမ်းမှာ အလုပ်နဲ့နှီးနွယ်သော ကန်ထရိုက် အင်ဂျင်နီယာ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်ကို တွေ့သမို့ ဘေးချင်းယှဉ်မောင်းလိုက်ပြီး လောကွတ် လုပ် ကျုပ် နုတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့
” မြောက် အိမ် သွား ကြည့်မလို့ပါ ”
လေကလည်းတိုက်နေတော့ စကားပြောသံက လေနဲ့လုံးနေတာပေါ့ ဒါနဲ့ဘဲ ကျုပ်နားထဲ မျောက် အိမ် သွားကြည့်မယ်ထင်တော့ ဘယ်လိုအိမ်လဲပေါ့ လိုက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်တွေးပြီး
” အဝေးကြီးသွားရမှာလား မဝေးရင်လိုက်ကြည့်ချင်လို့” မေးလိုက်တော့
” သိပ်မဝေးပါဘူး ရှေ့ ၃ ပြ လောက်မှာပါ လိုက်ခဲ့လေ ” သူကတော့ သူကန်ထရိုက်တာဝန်ယူဆောက်တဲ့ အိမ်ကို လိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ သူ့လက်ရာကြွားရချဉ်သေးရဲ့ ထင်ပုံပေါ့ဗျာ၊ အဲလိုနဲ့ သူပြောတဲ့ အိမ်လည်း ရောက်ရော လူနေတိုက်အိမ်တွေ့တော့ ကျုပ်ရှာရှည်ပြီးမေးလိုက်တာပေါ့
” ကိုယ့်ဆရာပြောတော့ မျောက်အိမ်ဆို ဘယ်မှာလဲဗျ ” ပေါ့ ဆိုတော့ ကျုပ် မိတ်ဆွေက
” ဘယ်က မျောက် အိမ်လည်း ကျုပ်လာတာ ဒီအိမ်ဘဲလေ ” ဆိုပြီး စိတ်ပျက်တဲ့ အကြည့်နဲ့ စိုက်ကြည့် နေပြီးမှ
” သြော် ခင်ဗျား နားကြားလွဲတာဖြစ်မယ် ကိုခင်ခရေ ကျုပ်က တောင်ဘက်အရပ်ကလာတာမို့ ခင်ဗျားက ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ မြောက်ဘက်အရပ်က ဒီအိမ်သွားမှာမို့ မြောက် အိမ် သွား မယ်ပြောတာကို ခင်ဗျက မျောက် အိမ်မှတ်တာကိုး ” ဆိုပြီး နှစ်ဦးသားရယ်လိုက်ရတာဗျာ၊ တော်သေးတယ် အိမ်ပိုင်ရှင်တွေမရှိလို့ ရှိများရှိရင် သူတို့အိမ်ကို မျောက်အိမ်လို့ ပြောတဲ့ကျုပ်ကို လိုက်ရိုက်လေမလားဘဲဗျ။
ကျုပ် မန်း စရောက်ခါစ လသိပ်မကြာသေးဘူး သူငယ်ချင်းနဲ့ချိန်းထားလို့ အသွားလမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်က ဖွတ်ချက် ဖွတ်ချက် နဲ့ ရပ်ပါလေရော၊ ဒါနဲ့ဘဲ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ဘယ်မှာရှိသလဲ အနီးနားမေးကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီနားက အ.လ.က ကျောင်း ဘေးကလမ်းမို့ တွန်းသွားပြီး ကြည့်ခိုင်းတာ ကာဗရိုက်တာဂျီးပိတ်တာ ဆေးရ မယ် ခဏစောင့်ရမယ်ဆိုတော့ အဲဒီတုန်းက အခုလို လက်ကိုင်ဖုန်း ဟန်းဖုန်းတွေ ပေါပေါသီသီဟုတ်သေးဘူး ဖုန်းရှိတဲ့ အိမ်တွေ ပီစီအိုတွေကဘဲ ဆက်ရတာမို့ ချိန်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းမျှော်နေမဆိုးလို့ အနီးနား စတိုးဆိုင် လေးကဖုန်းနဲ့ သူ့အလုပ်တိုက်ကို ဆက်ပြောလိုက်တယ်
” ငါ့ ဆိုင်ကယ် ခဏ၀င်ပြီး ကာဗရိုက်တာဆေးနေလို့ ” ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းက ဘယ်နားမှာလဲ သူလာခဲ့မယ် ဆိုတာနဲ့ ကျုပ်က အ.လ.က အမှတ် ( ×× ) ဘယ်လောက်ရဲ့ နောက်လမ်းမှာလို့ ပြောလိုက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းက တော်တော်နဲ့ ရောက်မလာလို့ ဆိုင်ကယ်ပြင်တာလဲပြီးတော့မှာမို့ မထွက်ရင် မထွက်ခဲ့နဲ့ မင်း အလုပ်တိုက်ကဘဲစောင့်ပြောမလို့ ခုနစတိုးဆိုင်က ဖုန်ထပ်ခေါ်ပြောတော့ သူငယ်ချင်းက ထွက်သွားတာကြာပြီတဲ့ ဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း မတွေးတတ်တော့ ဆိုင်ကယ်လည်းပြီးပြီမို့ ကျသင့်တဲ့ငွေရှင်းပြီး ခုန အလကကျောင်းကို ပတ်ခါ ကျောင်းအဆောက်အဦးရှေ့ကလမ်းပေါ် ဆိုင်ငယ်ချိုးကွေ့လိုက်ရင်ဘဲ
” မင်းကလည်း ဒီကျောင်း နောက်လမ်းမှာ ဆိုလို့ ငါ ရောက်နေတာ ကြာလှပြီ ဘယ်တွေသွားနေတာလဲ ငါ့ကို ချိန်ပြီး၊ ပြီးတော့ ဒီမှာလည်း ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် မတွေ့ဘူးလေ မှန်မှန်ပြောငါ့ ချိန်းပြီး ဘယ်သွားတာလဲ ” တဲ့
” မဟုတ်ဘူး ငါဆိုင်ကယ်ပြင်တာ ဒီကျောင်းအဆောက်အဦးရဲ့ ဟိုဘက်နောက်လမ်းမှာလေ ” ဆိုလိုက်တော့
” ဟာ အဲဒါ ငါ့တို့က ကျောင်း အရှေ့ ဒီဘက်က ကျောင်း အနောက် ခေါ်တာကွ ” တဲ့လေ
ကျုပ်တို့ ရန်ကုန်တုန်းက အဆောက်အဦးရဲ့ ဥပစာလှည့်တဲ့ဘက်ကို အိမ်ရှေ့ ကျောင်းရှေ့ အဆောက် အဦးရှေ့ ဆိုပေမယ် ဒီမှာက အဲဒီအဆောက်အဦး ဥပစာ ဘယ်လှည့်လှည့် အဆောက်အဦးရဲ့ အရှေ့အရပ် အနောက်အရပ် တောင်ဘက် မြောက်ဘက် ဆိုပြီ အရပ်မျက်နှာကိုယ်စားပြု ပြောကြတာကိုး ဆိုတာကို ကျုပ် သဘောပေါက်မိတယ်လေ။
ဒါတွေဟာ ကြာခဲ့ပြီး အခုတော့လည်း ကျုပ်တစ်ယောက် အရှေ့ဖက်သွား တောင်ဘက်ချိုး မြောက်ဖက်လမ်း စသည်ဖြင့် အရပ်မျက်နှာလိုက်ပြီးဘဲ ပြောတတ် နေတတ် ကြည့်တတ် နေပြီပေါ့လေ။
အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် ပြောရုံပဲဟာကို။
ရန်ကုန်မှာဆို ကျနော့ ရောင်းစားလို့ ရတယ်။
ဘာလမ်းမှ ကို မသိတာ။
အခုတော့ မှတ်ရလွယ်သွားပြီ မန်း ဂျပိုးလည်း ဖြစ်လေပြီလေ။
တကယ်တမ်းလည်း မန်း က လမ်းတွေက ဇီဇီခင်ဇော်ပြောသလို ရှေ့ နောက် တောင် မြောက် ပြောရုံဘဲလေ လွယ်ပါဗျ။
” ရန်ကုန်မှာဆို ကျနော့ ရောင်းစားလို့ရတယ်”
ဟုတ်ပ မန်းလေးများ ရောက်ရင် အရှေ့ကိုကွေ့ တို့ အနောက်ကို လှည့် တို့ ဆိုတာ တော်တော်ခေါင်းစားတယ်
ဒီတစ်ခါရောက်ရင် ရွာထဲက မန်းသူချောချောတွေ အကူအညီတောင်းဦး မှ
nozomi က အတော်ဆိုးတဲ့သူဂျီး
ဒီတစ်ခါရောက်ရင် ရွာထဲက မန်းသူချောချောတွေ အကူအညီတောင်းဦး မှ ဆိုတော့ ရောက်ဖြစ်ရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်တော့မယ် ဒါဘဲ။
မန်းကိုရောက်ရင် ဦးနှောက်အစားဆုံးက အဲသည့်အရပ်မျက်နှာနဲ့ တပြနှစ်ပြကိစ္စပဲ…
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက မြေကြီးအောက်အလုပ်မို့ ကြာလာတော့ အကျင့်ပါပြီး အရပ်မျက်နှာတွေကို မသိတော့ဘူး ။ တပြနှစ်ပြကိုလည်း အခုအထိ ဝေတေတေဝါးတားတား ။ အဆိုးဆုံးက မန်းရောက်ရင် ကားမမောင်းရဲတော့တာပဲ ။ ဆိုင်ကယ်တွေက အတင်းဝင် အတင်းထွက် … လမ်းတွေကလည်းမမှတ်တတ်… နောက်ကထိုင်စီးတာတောင် အသီးယားတယ်…
ဘယ်တော့လာအုံးမလဲ ကိုယ့်ဆရာ တစ်ခါတည်း အရပ်မျက်နှာနဲ့အပြ အကြောင်းနှောကြေစွာသိသွားအောင် သင်ပေးလိုက်မယ်လေ။
ကားဝင်းကနေ ငှားလာတဲ့ တက္က ဆီ သမား ကို
ကျနော်က အနောက်ဘက်ချိုးတို့ မြောက်ဘက်ကွေ့ တို့ လုပ် တာ
ကားသမားက အတော်လေး စိတ်ညစ်သွားရှာတယ်
အိမ်လဲတော်တော် နဲ့ ရှာမတွေ့တော့ဘူး တစ်လွဲ တွေေ၇ာက်ကုန်တာ
ဟ ဟ ရွာလည်မှာပေါ့ ကိုပေါက်ရာ
ရန်ကုန်မှာက ဘယ် ညာ ပြောကြလေတော့ အရပ်မျက်နှာနဲ့ဆို မသိကြတာများတယ်လေဗျာ။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ….မန်းလေးကိုတစ်ခေါက်ပဲရောက်ဖူးတယ်..ဟီးဟီး ဂိုက် ခေါ်သွားရတယ်….:)
နောက်တစ်ခါ ရောက်ရင် ဂိုက်မခေါ်နဲ့ ကိုညိုဝင်းရေ၊ ကျုပ်တို့ကိုသာ ဆက်လိုက်ပါဗျာ
နောက်ပိုင်းမိုဒယ်ကားတွေမယ်.. တပ်ခ်ျစကရင်နဲ့အတူတူ.. အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်.. မီတာလေးပါ ပါနေတာအတွေ့များတယ်..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်က.. တော်တော်အရေးကြီးသဗျ…။
ခရီးသွားတုံး.. မှားရင်.. ဖရီးဝေးနဲ့မြောပါသွားပြီး.. မိုင်၂၀-၃၀ အချောင်ဖြစ်သွားမှာ…။
အယ်လ်အေဆို.. ဖရီးဝေးတွေကို.. အရှေ့အနောက်အတွဲတွေ.. တောင်မြောက်အတွဲတွေနဲ့.. ကွန်ယက်ထားသမို့.. အဲဒါသိရင်.. လမ်းကဘယ်တော့မှ မပျောက်..။
တောင်အရပ်(South)နဲ့.. တောင်( Mountain)
အရှေ့အရပ်(East)နဲ့.. အရှေ့ဖက်( Front)..
တွေကို.. မြန်မာစာ/စကား ပြင်သင့်.. ညှိသင့်တယ်… ထင်..။
တကယ်တော့ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်က ခရီးသွားရင် အတော်အသုံးဝင်ပါတယ်၊ တောလမ်းခရီးဆို ပိုလို့တောင် အဆင်ပြေသေးတယ်လေ။
မန်းလေးသွားရင် သံလိုက်အိမ်မြောင်သယ်ရမယ်.. ခုတော့ ဖုန်းမှာ ဂျီပီအက်စ်တွေသုံးလို့ရနေတော့မဆိုးဘူး.. ကျမလည်း မန်းလေးက လိပ်စာတွေကြည့် သိပ်ရှုပ်ပဲ.. ဘယ်နှစ်လမ်းနဲ့ ဘယ်လမ်းကြား.. ဘယ်လမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းကြားဆိုပြီးလေ… ကိုယ့်အရပ်မဟုတ်တာလည်းပါပါတယ်.. သေချာမြေပုံချကြည့်လေ့လာရင်တော့ လွယ်မှာပါ…
သများကို ခေါ်ပြီး စားသမျှ ရှင်းရင်
အခမဲ့ ဂိုက် ပေးမယ်။
မန်းလေးကလမ်းညွှန် “အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်” က…ဒီလိုနဲ့တူရဲ့
မန်းလေးနန်းတော် မြို့ရိုးကြီးက အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် တိတိကျကျကြီးတည်ထားတာဗျ
ဆိုတော့ အပြင်ဖက် အရပ်သားတွေနေကြတဲ့နန်မြို့ရိုးအပြင်ဖက်တွေကိုတော့
အရှေ့ပြင်၊အနောက်ပြင်၊တောင်ပြင်၊ မြောက်ပြင် ရပ်တွေလို့ခေါ်လာရင်း
ခေတ်အဆက်ဆက် မန်းလေးမှာ အကျင့်ဖြစ်သွားပုံရတယ်ဗျို့….
တစ်ပြနှစ်ပြကိုလည်း နန်းမြို့ရိုးက ပြအိုး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အကွာအဝေးကို မှန်းပြောကြတာပဲမဟုတ်လား..
ဖော်ရွှီးတယ်ဆိုသော ဆြာမိုက်ပြောတာကလည်း အဟုတ်ပါဘဲဗျ၊ ကျွန်တော် မန်းမြို့ အကြောင်းရေးထားတဲ့ စာပေတွေထဲ အဲလိုဆန်ဆန်ရေးပြထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်လေ။
အနေကြာတော့လည်း အသေအချာကို သိတာဘဲလေ။
လေးခ ကျနော်နဲ့တွေ့ရင် အဲဒီထက်ဆိုးမယ်
ကျနော် ညွှန်းရင် အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် တင် မကဘူး
အပေါ်တွေ အောက်တွေပါ ပါတတ်သေးတာ
၂၆ လမ်းအတိုင်း ဆင်းလာပြီ တို့ ၃၅လမ်းကနေ တက်ခဲ့လိုက် တို့
ဟိဟိ… မန်းလေးမယ် အသိတွေများတော့.. ဘာမှ မှတ်မထားတော့ပါဘူး.. သူတို့ခေါ်တဲ့နောက် လိုက်သွားရုံပဲ..
အဟိ ရန်ကုန်ကလူတွေကတော့ မန်းလေးရောက်ရင် တပြ နှစ်ပြ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်တွေနဲ့ရွာ ကိုလည်နေတာပဲ။ တခါတလေ နေကမမြင်ရတော့ လက်လဲဆန့်တန်းလို့မရ အတော်ဂွကျတာ။ တက်ဆီကလဲမရှိ။ တခါရွာလည်ဖူးတယ်မန်းလေးမှာ။ အဲ့ဒါ မန်းလေးသားတွေကိုပြောမိတော့ သူတို့ကရန်ကုန်ကိုသာမသွားတတ်တာတဲ့။ လမ်းနာမည်တွေနဲ့ နံပါတ်တွေနဲ့ အကွက်ကျကျလဲမဟုတ်ဘူး။ မန်းလေးဆိုရင် အကွက်ကျကျမို့ပိုလွယ်သတဲ့
အနော် တက္ကသိုလ်စတက်ခါစ တုန်းကဆိုရင် မှတ်မှတ်ရရပဲဂျ။ အနော်နေမယ့် အဆောင်က မြို့သစ်ဘက်လို့ပြောလို့ရမယ့် ၄၂လမ်းထဲမှာပေါ့။ လမ်းချိုးတွေက ခပ်ဆင်ဆင်ဆိုတော့ သီရိမန္တလာ ကားကြီးဝင်းဘက်မှာရှိတဲ့ လေးဘီးတွေဆိုရင် အဲဒီဘက်ရောက်ရင် မျက်စိလည်တတ်ကြတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ စတက်တက်ချင်းနှစ်မှာပဲ နေမယ့် အဆောင်တွေ့ဖို့အရေးကို ရှာလိုက်ရတာ မိုးချုပ်ခါနီးမှ အဆောင်ကို တွေ့တယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်တာတောင် လေးဘီးတွေကို ရောက်ရင် ကွေ့ဖို့ ပြောပြရတုန်း။